PressReader - Ilanga: 2017-09-04 - BONGINKOSI ZONDI
Ilanga - 2017-09-04 - Izindaba - SITHOLAKALA KUPHI? ISIMO NOKUBUKEKA KWASO UMZIMBA IMIKHUBA YEMPIO YASO IZITHA ZASO UKUZALANA KWASO OKUNYE NGESIKHONYANE
IQHWAGI ngesinye sezinambuzane ezisemndenini wezintethe, phakathi kwazo okubalwa intothoviyane, iqhwagi, isikhonyane, umzondo, iboni, inyendle kumbe isihlonono njalo njalo. Nalapha sihlanganisa ulwazi lwendabuko luhambisana nolwesayensi.
Uma umfula ugcwele amaZulu anesisho esithi udla izindwani noma athi ugola izintethe. Kwezinye izindawo lapho intethe ibizwa ngokuthi yiboni, uzwa sebethi neboni kwaze kwabonakala ukuthi libelethe indoda - besho besusela ekuthini insikazi evamise ukuba nkudlwana kuneduna, nxa zibelethene ngesikhathi sokukhwelana kuba sengathi insikazi lena ibelethe umntwana kanti qha.
Ngenxa yobuningi bezinhlobo zezintethe, kakwaziwa ukuthi nxa kuthiwa umfula ugcwele ugola izintethe kusuke kushiwo luphi uhlobo kulezi esezibaliwe.
Ngokwesayensi-ke isikhonyane lesi sisemphakathini omkhulu wezintethe, okuthiwa yi-Orthoptera. Umehluko ngokubukeka phakathi kwesikhonyane neqhwagi mncane, nokho imikhuba yempilo yalokhu yehlukene. Isikhonyane siyahlangana sibe siningi bese sifuduka.
Lapho sihlala khona sishaya siqothule konke okumila yo . Ama- qhwagi wona ayazihlale la ngawodwa. Uhlobo lwesikho- nyane olufudukayo yilona olwaziwa kakhulu ngakho ukufuduka lokhu. Sitholakala ezingxenyeni zomhlaba eziningi ngaphandle kwasezinqeni zezwe e-Antarctica lapho kuhlala kuneqhwa khona ubusika nehlobo. Uhlobo olubizwa nge-desert locust, yilona olwaziwa kakhulu ngenxa yokuba sezindaweni eziningi zomhlaba njengasenyakatho ye-Afrika, eMiddle East nase-India.
Yilona olukwazi ukufuduka amabanga amade. Ngowezi-2003 emuva kwezimvula eziningi ngokungavamile, isikhonyane safudukela ezindaweni eziningi ezisentshonalanga ye-Afrika eMali, eNiger, eMorocco nase-Algeria. Sasuka lapho saqonda e-Egypt, eJordan nakwa-Israel - okwase kuphele iminyaka engama-50 sagcina ukuhlasela. Isikhonyane wuhlobo lwentethe olwehluke “ngezimpondo” ezimfushane, ngolimi lwesayensi okuthiwa yi-antennae. Insikazi neduna kunomehluko esidunwini lapho iduna liba nomzimba omisise okwesikebhe kanti insikazi inokusazindlawu ezivule- kile kokunye ezihlan- gene. Lezi
zindlawu ziyisiza ukumba umgodi esizozalela
amaqanda. Kuthiwa ngisho nensikazi engakakhwelwa iyawenza umkhuba wokugubha enhlabathini njengoba iyokwenza uma sekufanele izalele. Isikhonyane siyazihlanganisa izinyanga eziyisihlanu kuye kweziyisi-6 siphila. Isikhonyane esesikhulile silinganiselwa esi-7cm ubude futhi singaphezudlwana kweqhwagi, kuthi amaphiko aso ukwazi ukubona ngalena kwawo. Ngokuvamile umzimba wesikhonyane - njengezinye izinambuzane emndenini wezintethe - sinomzimba oyizingxenye ezintathu: ikhanda, isifuba nesisu. Ingaphandle lomzimba linesisu esinamaginxi ali-11 noma ali-12 kanti ingaphandle lawo lembozwe "wuhlaka lwamathambo‚" (exoskeleton). Iginxi lesi-8 nelesi-9 lesisu linezitho zangasese. Ngokuvamile le nhlobo yentethe ihamba ngayodwa kodwa phansi kwezimo ezithile le ndlela yokuphila iyaguquka bese zihlangana zibe yisibalo esikhulu kakhulu. Uma sizihlalele ngasodwa isikhonyane, kasiyona ingozi kepha uma zike zahlangana ngesikhathi kukhula masinyane izitshalo emuva kwezimvula ezilandela isomiso. Ukufuduka lokhu kungathi kuyazenzekela
ngenxa yokuminyana. Lokhu abacwaningi bathi kwenzeka ngokuthi sithintana nezinye kangaki ngom- zuzu esikhathini esingamahora amane. Lokhu bathi kwenza isikhonyane siguqule umbala bese sidla kakhulu kunakuqala futhi sande masinyane. Iqulu noma umhlambi wesikhonyane ubalwa ngezigidigidi futhi usabalala nendawo ebalelwa ezinkulungwaneni zama-square/km, lapho zisuke silinganiselwa ezigidini ezingama-80 isquare/km ngasinye. Uhlobo olufudukayo lunempilo enezigaba ezimbili: lapho luphila lodwa nalapho luphila nezinye zibe ziningi.
Uma sizihlalele sodwa, izibungu zaso ziba nombala oluhlaza noma onsundu kuthi uma sesikhulile sibe nsundu namabala aluhlaza - kuye ngokudla esikudlayo ngaleso sikhathi. Uma siphila emhlambini nezinye izibungu zaso ziba nsundu namabala aphuzi futhi ngobukhulu ziba ngaphansi kwesigaba lapho siphila ngasodwa.
Inkasa echamusela lapho futhi engakabi namaphiko, nayo idla okumilayo kuthi kamuva imile amaphiko bese iba yisikhonyane esikhulile, esikwazi ukundiza amabanga amade nokuthi lapho sihlale khona sidla sishaye sibhuqe yonke into emilayo. Isikhonyane sikwazi ukundiza amahora ali-15 sikhathi
Isikhonyane sidla konke okumilayo - utshani, okusanhlamvu, yizihlanokunye. Izitha eziyingozi empi-
lweni yesikhonyane yizinyoka, yizinyoni nezinyamazanae ezincane. Njengezinye izinambuzane, isikhonyane sizalela ngokuba iduna lidlulisele imbewu yalo ensikazini ngesikhathi zikhwelana bese insikazi izalele amaqanda.
1. Isikhonyane namadiye kuthi makufane ngokubukeka futhi kungaphansi komndeni owodwa, i-Caelifera wona onezimpondo ezimfushane, kuthi ezinezimpondo ezinde njengenyendle, zibe ngaphansi komndeni i-Ensifera. Kwehlukana ngemikhuba yempilo kuphela.
2. Lesi sinambuzane “izindlebe” zaso zisesiswini. Kuzo zombili izinhlangothi zeginxi lokuqala lesisu, phansi kwamaphiko kunothwethwesana olwenanela ngokunyakaza uma kunomsindo.
3. Lolu hlobo lwentethe umsindo luwuhlukanisa ngesigqi nokuba mkhulu kwawo kodwa kalukwazi ukuhlukanisa phakathi komsindo onswininizayo noma ondondayo. Umsindo owenziwa yiduna kawuwenzi umculo kwazise insikazi kayinandaba noma iduna licula kahle noma qha.
4. Njengezinye izintethe umsindo siwenza ngokugudlisa emilenzeni amaphiko aso angaphambili.
5. Isikhonyane sigxuma siye phezulu bese siqala lapho ukundiza, kakhulukazi uma sibalekela izitha zaso.
6. Ukugxuma kwalolu hlobo lwentethe kuyababazeka. Uma umuntu ebengagxuma njengalesi sinam- zane, angase akwa- gxuma kalula ngangenkundla buzi ukuibanga elikanobhu-
7. Isikhonyane senza umonakalo oyizigidigidi ezitshalwesizihambela yona ingomo ni. Uma sisodwa kasi- zi yize umtha- wokudla esiwudlayo ngosuku ulinganiselwa esisindweni somzimba waso.
8. Lolu hlobo lwentethe kwezinye izindawo luwukudla okumqoka okunezakhamzimba nama-protein. bonginkosi@ilanganews.co.za Umthombo ngabe: en.wikipedia.com